Wararka – Page 2 – Arrimaha.com
Ka dib shir uga socdey illaa bishii October, 2017-kii, Guddiga Siyaasadda ee Ururka Waqooyi Bari(UWB), wada xaajood iyo tashi dheer la galay bulshada kala geddisan ee Reer
Madaxweynaha Fadaraalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho taariikhiya ku tegey deegaannada Puntland ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo horay wefdi uu hoggaaminaya wasiirkiisa Qorshaynta Qaranka, Jamaal Maxamed Xasan,
November 10, 2017 (Arrimaha.com) Waraysi ayaan la yeelannay Afhayeenka Ururka Waqooyi Bari, Soomaaliya(UWB), Eng. Amiin Cabdiraxmaan Siciid. Amiin oo nagala soo xiriiray magaalada Minneapolis, Minnesota ee Maraykanka, ayaa wuxuu
Sida Ay Ula Muuqato In Loo Wajaho Siyaasadda Soomaaliya ee Dibadda…
War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ay dileen Taliye ku-xigeenkii hore ee Saadka Militeriga Janaraale C/llahi Qururux. Dilka Taliye ku-xigeenkii hore ee Saadka
Waraysigan uu Ex xildhibaan Cawad Axmed Cashare siiyey Golaha1960 iyo Websaydhada ay wada shaqeeyaan ayuu kaga waramay Sharci darada iyo cadaalada xumada ka muuqata Magacaabida golaha wasiirada ee
Bam ayaa xiliga Maraykanka ee salaada subax lagu weeraray Masjidka Darul Faruq oo ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Qaraxa ka dib ayaa ciidamo faro badan oo
Waxaa goordhaw qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ka dhacay Laamiga Maka Al Mukarama gaar ahaan meel aad ugu dhaw